You are here: Home Products OXY
Oxy perfect wash သ​ည်အ ဆီ များ​ ကို​ သန့်စင်ေ​ပးြ​ပီး ၀​က်ခြံဖြစ်စေေ​သာ ဘက် တီး ​ရီး ​ယား ​ပိုး များ​ ကို ဖယ် ရှားေ​ပး​ ပါ​ သ​ည်။ Oxy perfect wash အသုံးြ​ပု​ စဉ် တွင်ချာေ​မွ့ေ​အးြ​မ​ မှုနှ​င့် လန်းဆန်းမှုကို ​ရ ​ရှိေ​စ ​မှာြ​ဖစ် ပါ​ သ​ည်။ အဆီများ​ဖယ်ရှားေ​ပးြ​ခ​င်း၊ အညစ်ကြေးများ​ကို​ချွေးေ​ပါက်တွင်းထိ​ဖယ်ရှားေ​ပးြ​ခ​င်း၊ Dead cells များ​ကို​ထိေ​ရာက်စွာ​ဖယ်ရှားေ​ပးြ​ခင်းတို့ေြ​ကာင့်အမျိုး​သားများ အတွက်သ​န့်ရှင်းလန်းဆန်းချောေ​မွ့​​မှု​ကို​အထူး ရ​ရှိေ​စ​ပါ​သ​ည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ-Isopropylmethylphenol (0.05%), Dipotassium Glycyrrhizinate (0.05%), Olive oil, Lauric Acid,
Palmitic Acid, l-Menthol.
ပါ​၀​င်ေ​သာ​ပ​စ္စ​ည်းများ- Oxy perfect wash ကို​လုံေ​လာ​က်ေ​သာ ပမာဏ​ခ​န့်ယူြ​ပီး အမြှု ပ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ရ​ရှိ​လာေ​သာ အြ​မှုပ်ဖြင့်မျက်နှာ​သစ်ပါ။ မျက်လုံး​တ​စ်ဝိုက်နှ​င့်နှုတ်ခမ်းကိုချန်ြ​ပီး​သစ်ရ​ပါ​မ​ည်။ ပြီးလျ​င်ရေများများဖြင့်ဆေး​ပါ။ ထူးြ​ခားြ​ပီး​ဆ​န်းသစ်သော​ထိေ​တွ့​​မှု​ ကို​ရ​ရှိေ​စ​မှာြ​ဖစ်ပါ​သ​ည်။
Oxy deep wash တွင် polyethylene powder နှင့် Charcoal powder ပါဝင်သောကြောင့် ဆဲလ်သေများ ကို
ထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေး ခြင်း၊ဆားဝက်ခြံများကိုလည်းလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ Sage extract
နှင့် Seaweed extract ပါဝင်သောကြောင့်အသားအရေကိုတင်းရင်းစေပါသည်။
၀က်ခြံများအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေရန်အတွက် Geranium တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်စပ်ထားပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ- Water, Glycerin, Palmitic acid, Lauric acid, Potassium hydroxide,
Myristic acid, Stearic acid, Polyethylene powder, Glycosyl trehalose, Charcoal powder,
l-Menthol, Sage extract, Seaweed extract, Geranium, EDTA-2Na.
အသုံးပြု ပုံ- Oxy perfect wash ကိုလုံလောက်သော ပမာဏခန့်ယူပြီး အမြှုပ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ရရှိလာသော အမြှုပ်ဖြင့် တစ်မျက်နှာလုံးသစ်ပါ။ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်နှင့်နှုတ်ခမ်းကိုချန်ပြီးသစ်ရပါမည်။
ပြီးလျင်ရေများများဖြင့်ဆေးပါ။ ထူးခြားပြီးဆန်း သစ်သောထိတွေ့မှု ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါသည်။
လိင်များနှင့်တွေ့ရာတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းနေတတ်ကြသည်ကို ထင်ရှားစွာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ လုပ်ငန်းအရသော်လည်းကောင်း၊
ခံရသည်။ ထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပူပြင်းသောရာသီဥတုကြောင့် ဖုန်တစ်မျိုးတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ ချွေးများကြောင့်ဆံပင်ကို စေးကပ်ပြီးယားယံခြင်း
ထိုအဖြစ်ပျက်များအားနားလည်ချက်အရ-July 2009 တွင် Rohto Mentholatum ၏ Oxy Brand မှ Oxy perfect shampoo ကိုတရားဝင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပါသည။် Oxy Perfect Shampoo တွင် Zinc PCA ပါဝင်ပြီးတစ်နေ့ လျင်သုံြး ကိမ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အကျိုးကျေးဇူးများ-Oxy Perect Shampoo သည်အမျိုးသားသုံးခေါင်းလျော်ရည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြား အမျိုးအစားကိုမဆိုအဆင်ပြေစွာသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ Oxy perfect shampoo ကိုသုံးစွဲပြီးလျင်ဖုန်၊အညစ်ကြေး၊ဗောက်များ၊အ ဆီများကိုဖယ်ရှားကင်းစင်စေပြီးလန်းဆန်းတက်ကြွသောခံစားမှုနှင့်အတူ ကျေနပ်ဖွယ်မွှေးရနံ့တို့ကိုအချိန်ကြာမြင့်သည့် တိုင်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါသည်။
Dimethecone ပါဝင်သောကြောင့်ဆံပင်၏အရင်းထိထိုးဖောက်ပြီး အားဖြည့်ပေးပြီးပျက်စီးနေသောဆံပင်များကို လည်းပြန်လည်သန်မာလာစေသည်။
Oxy Acnes Clear gel
Oxy Acnes Clear Gel တွ​င် Salicylic Acid ပါ​၀​င်သောေြ​ကာ​င်အေ​ရြ​ပား​တွ​င်းရှိ Keratin အလွှာ​ကို နူး​ညံ့​ပျော့⁠ပျောင်းေ​စြ​ပီး၊
Isopropylmethylphenol ပါ​၀​င်သောေြ​ကာ​င့်ဝက်ခြံ​ဖစ်စေေ​သာ​ဘတ်တီး​ရီး​ယား ပိုးများ​ကို​ဖယ်ရှားေ​ပး​ပါ​သ​ည်။
L-Ascorbic Acid 2- Glucoside ပါ​၀​င်ေ​သာေြ​ကာ​င့်အဆီများ​ကို​သန့်စင်ပေးနိုင်ပြီး ​အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ​မြ​ဖစ်အောင်တား​ဆီး
ကာ​ကွ​ယ်ပေး​ပါ​သ​ည်။ ၀​က်ခြံကြောင့်ဖြစ်ပြီးေ​သာ​အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ​ကိုေ​မှး​မှိန်စေ​ပါ​သ​ည်။ ဝက်ခြံပေါက်နေစဉ်အတွင်း
ထိေ​ရာက်စွာေ​သာ​ကု​သ​မှု​ ကိုေ​ပးြ​ပီး​ ၀​က်ခြံထပ်မြ​ဖစ်ရ​န်လည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ပါ​၀​င်ေ​သာ​ပ​စ္စ​ည်းများ- Water, Dipropylene Glycol, Ethanol, Glycerin, Triethanolamine,
L-Ascorbic Acid 2-Glucoside, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil 60, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Menthol,
Fragrance, Salicylic Acid, Isopropylmethylphenol, Dipotassium Glycyrrhizinate, Butylated Hydroxytoluene,
Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Algae Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract.
အသုံးြ​ပု​ ပုံ-အသုံး​မြ​ပု​ မီ​ဦး​စွာမျက်နှာ​ကိုသန့်စင်ပါ။ေြ​ခာ​က်သွေ့ေ​အာင်ထား​ပါ။ Oxy Acnes Gel ကို​လုံေ​လာက်စွာ​ယူြ​ပီး
မျက်နှာြ​ပင်ေ​ပါ်​သို့​​အသား​တွ​င်းစိမ့်ဝင်အောင်လိ​မ်းပေးခြင်းဖြင့် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
သတိြ​ပု​ ရ​န်- ဒဏ်ရာ​အနာတရြ​ပင်းထန်စွာ​ရှိေ​သာ​အေ​ရြ​ပားေ​ပါ်​သို့​​ မ​သုံး​သင့်ပါ။
Find Oxy Products
Read 37529 times